China Couple intambo bristles isixubho ibhrashi ifektri abakhiqizi | Enyuan
Leli bhulashi lamazinyo elenzelwe ngokukhethekile linamakhanda amabhulashi amabili amise okwenhliziyo, ahlanganiswe abe yiphethini ephelele emise okwenhliziyo. Inhloko yebhulashi yakhelwe ngeXiaoqiao, elula futhi evumelana nezimo ukuhlanza amazinyo emakhoneni
igama lomkhiqizo Ibhulashi lamazinyo eliyizithandani
Izici Hlanza, uvikele ushingamu
Ibhulashi ububanzi 0.01mm
0.01mm uboya besilika obuhle
Ububanzi bethiphu lemicu yebhulashi elincane njengo-0.01mm abugcini nje ngokuhlanza amabala ebusweni bamazinyo, kodwa futhi bungangena bujule esikhungweni se-gingival sulcus nasezikhungweni zokuzivikela; imicu yebhulashi ethambile inakekela ngobumnene izinsini, yenza izinyo ngalinye libe msulwa futhi licace njengothando ngaphandle kokushiya ukungcola.
Isibambo sebhulashi sisebenzisa umbala wakudala omnyama nomhlophe, umklamo ulula futhi unethezekile, futhi umzimba wonke wenziwe ngepulasitiki ebangeni lokudla, elintofontofo lapho lithinta
Ungaxubha kanjani amazinyo ngendlela efanele?
Kunconywa ukufaka ibhulashi lamazinyo esikhundleni sezinyanga ezintathu. Uma kusetshenziswa ibhulashi lamazinyo isikhathi eside, amabristisi azogqokwa futhi agobeke kalula futhi nekhono lokuhlanza lizokwehla. Ngasikhathi sinye, ikhanda lebhulashi liyindawo yokuzalanisa amabhaktheriya.
1: Ama-bristles namazinyo athambekele ku-angle ye-45 °, cindezela ngobumnene, shayela izikhathi ezingama-4-6 ngokuvundlile bese uxubha ngokuqondile.
2: Shayela uhlangothi olungaphandle lwamazinyo aphezulu nangaphansi kuqala, bese uxubha uhlangothi lwangaphakathi lwamazinyo, uhambise isixubho emuva nangaphambili.
3: Shayela indawo ehlafunwayo, ubeke ibhulashi lamazinyo licabalele, unyakazise isixubho emuva nangaphambili kafushane, futhi uhlanze ngokucophelela amazinyo.
4: Shayela ngemuva kwentaba ukucindezela phansi, udinga ukuxubha ingxenye engaphambili yebhulashi kusuka ngaphakathi nangaphandle.
5: Ekugcineni, hlikihla ulimi, hlikihla ngobumnene ukusuka phansi kolimi uye ekugcineni kolimi ukuze ususe ukumboza kolimi futhi ususe amabhaktheriya.
6: Xubha amazinyo akho ngekhwalithi ephezulu imizuzu emithathu isikhathi ngasinye ukuze ugcine umoya wakho uhlanzekile.
Langaphambilini izinkulungwane eziyishumi zezinwele isixubho zenzelwe kahle akakwazi ukulimaza izinsini
Olandelayo: i-oem ithambile ibhulashi elincane lekhanda lokuxubha
Ibhulashi lamazinyo elibushelelezi elithambile